Ezinye izindlela zokubuyisela esimweni sefektri ku-Chromebook | Izindaba zamagajethi
Ungabuyela kanjani kusimo sefektri ku-Chromebook yethu
Njenganoma imuphi umshini esiwuthola ngesikhathi esithile, ukumiswa kwawo ngemuva kwesikhathi sokusetshenziswa kuzohlala kwehlukile kunalokho ebesingakuthola kusimo saso sokuqala; i-Chromebook ayihlukaniswa nale misebenzi ngumsebenzisi, ovame ukwenziwa ngezifiso kubo ngokuvumelana nesithakazelo sakho kanye nesidingo.
Ngokunjalo, ngenxa yalezi zinhlobo zokuguqulwa, uhlelo lokusebenza lwekhompyutha yethu nalo lungahluleka, lapho kuzofanele senze khona buyela esimweni sefektri, lokhu kuyinjongo esizobhekana nayo kule ndatshana kepha ezinikezelwe ngqo kwi-Chromebook nangaphansi kwezindlela zokusebenza ezihlukile.
1 Usebenzisa isici se-Powerwash ku-Chromebook
2 Khubaza imodi yonjiniyela ukufaka kabusha i-Chrome Os
3 Ukudala imidiya yokuthola kabusha ukufaka i-Chrome Os
4 Phoqelela ukutakula kwesistimu ku-Chromebook
Usebenzisa isici se-Powerwash ku-Chromebook
Okunye okuhlukile esizokubalula yilokhu, okungukuthi, emsebenzini ozowuthola njengengxenye yohlelo lokusebenza lwe-Chromebook. Lokhu kudinga ukusebenzisa ukuxhumana kwe-Wi-Fi, ngoba kuzoba njalo ukutakula okususelwa efwini ukuthi lo msebenzi usiphakamisela ini. Ukuze sikwazi ukukwenza, kuzofanele silandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Sivula i-Chromebook yethu.
Siqala iseshini yakwa-Google ngemininingwane efanele.
Sivula i-Chrome ku-Chromebook.
Manje siya ezansi kwesikrini.
Lapho senza kusebenze i- «bonisa izinketho ezithuthukile".
Sifuna umsebenzi we I-Powerwash bese sikhetha inkinobho yaso.
Siqala kabusha ikhompyutha.
Ngalezi zinyathelo ezilula sizobe sesivele sibuyele kuzilungiselelo zefektri ku-Chromebook, ukuze idatha yethu yomuntu siqu esiyilungiselele ekuqaleni izosuswa ngokuphelele.
Khubaza imodi yonjiniyela ukufaka kabusha i-Chrome Os
Ukube ubusebenza ku-Chromebook yakho njengonjiniyela, lapho-ke uzobe ushintshe izinketho ezimbalwa zohlelo lokusebenza ukuze zisebenze kahle. Kulolu hlobo lwamacala kukhona nethuba lokubuyisela imishini esimweni sefektri, kuphela ukwenza okulandelayo:
Siqala kabusha i-Chromebook yethu
Isikrini sokuqinisekisa se-Chrome Os sizovela.
Esikhundleni sokucindezela i-CTRL + D ukuze sifinyelele ekhasini lesiguli, sicindezele i- Espacio.
Ngale nqubo Imodi kanjiniyela izokhutshazwa, inqubo yokufaka yesistimu yokusebenza iza ngokuzenzekelayo ngemuva kwalokho.
Ukudala imidiya yokuthola kabusha ukufaka i-Chrome Os
Izinqubo esiziphakamisa ngenhla zivumelekile ezindaweni zokusebenza ezahlukahlukene; owokuqala kubo uhlose uku susa wonke lawo ma-akhawunti esiwamisile, ukwazi ukuthengisa i-Chromebook ngokuhamba kwesikhathi ngaphandle kokwesaba ukuthi lolu hlobo lolwazi luzobuyekezwa. Icala lesibili lifana ncamashi, izinqubo ezibheka ukusebenza okujwayelekile (noma okuvamile) kwemishini. Kepha kungahle kube necala lokuthi lihlinzwa kabi, liza ngaleso sikhathi, isidingo salo sebenzisa uhlobo oluthile lwemidiya yokutakula esikhiqize ngaphambilini.
Kungenzeka uyazibuza Ungayithola kanjani i-Chrome Os uma ikhompyutha ingasebenzi? Leyo yingxenye enhle kunazo zonke, ngoba kufanele ubhekise maqondana nayo kuphela lesi sixhumanisi bese ulanda uhlelo lokusebenza lokho kuzokhiqiza indlela ye- ukuvuselelwa ku-USB stick noma ekhadini le-Micro SD, okumele idlule u-4 GB wesitoreji. Ngemuva kwalokho, kuzofanele siqale kabusha i-Chromebook ngedivayisi efakiwe.
Uhlelo lokusebenza esiluncomile lungenziwa ngaphandle kwenkinga kukhompyutha ene-Windows, Linux, Mac Os X ngisho naku-Chromebook ehlukile.
Phoqelela ukutakula kwesistimu ku-Chromebook
Lokhu kungaba uhlelo olunzima ukwedlula konke ukwenza yize lusebenza ngempumelelo. Uma izindlela eziphakanyiswe ngaphezulu zingazange zisebenze, kufanelekile ukuzama lena enye, okuluhlobo oluthile lokukhohlisa ngokomsebenzisi ngumsebenzisi.
Ukuze senze lokhu, kuzofanele sikhokhe i-Chromebook futhi ngokuhamba kwesikhathi, sibambe izinkinobho noma izinkinobho ezi-3 ngasikhathi sinye:
Ukhiye we-Refresh, ovame ukutholakala kukhiye womsebenzi we-F3
Inkinobho "yamandla noma yamandla".
Ngokwenza lokhu, i-Chromebook izoqala kabusha ibe "imodi yokutakula" futhi ngalokho, isistimu yokusebenza izobuyiselwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Ungabuyela kanjani kusimo sefektri ku-Chromebook yethu
SAWUBONA. INKINGA YAMI IYALANDELA. NGILANDA ISICELO NGOKWOKUTHOLA. UMA NGIYIHAMBA KU-C HROMEBOOK OWONAKELELE, NGIQHAMUKA NGE-LEGEND YEPHUTHA ELINGALINDELEKILE. Ngingaxazulula kanjani inkinga yami
gaby lopez kusho
inkinga efanayo ye-walter nokulinda impendulo ngicela ukhuthaze
Phendula ku-gaby lopez
UNorman Gerardo Rojas R. kusho
Usizo! Bengizama izinyanga ngamadrayivu ahlukile asuswayo futhi akukho lutho, kuvela iphutha elingalindelekile.
Phendula uNorman Gerardo Rojas R.
Qhathanisa akubona bodwa, iqiniso ukuthi angikatholi ukuthi ngingaxazulula kanjani le nkinga ...
Ami kwenzeke kimi kepha umzamo wesibili ngiwusebenze ngale ndlela futhi ngikwenze ngokushintsha i-usb nenkinga ekulungele ukuxazululwa qhubeka uzame.
Uma ungakayixazululi, unenqubo efanayo futhi ubheka i-ami ethile yokufundisa ngithole iphutha kepha emzameni wesibili ngayixazulula ngoba ngikwenze ngenye i-8 gb us, ngenhlanhla.
Kwenzeka into efanayo kimi, sengivele ngiyilande kuma-USB amabili (eyodwa i-8G nenye eyi-16G) futhi akukho lutho ekugcineni elihlala lingitshela iphutha elingalindelekile. Ngicela usize
Jaime, unenqubo yokulanda ithuluzi futhi qiniseka ukuthi konke kwenziwa ngendlela efanele bese ucisha i-chromebook, faka i-usb bese uyayivula futhi ngenhlanhla ivule kahle
Inkinga yami nge-chromebook yami ukuthi ikumodi yezivakashi ngingayixazulula kanjani ngicela ungisize.
UCarlos Garcia kusho
Hehe ngisafana nakubo, kungitshela iphutha elingalindelekile, uma othile elixazulula ngenye indlela, ungazise.
Phendula uCarlos Garcia
Ngihlala ngizama njalo futhi ngithola iphutha elifanayo ebingalindelekile.
ngisize nginenkinga efanayo nawe
UGiselle peters kusho
Ngiyafana! Iphutha elingalindelekile eliphindayo (selivele lihlolwe ngamadivayisi we-3 usb).
Phendula uGiselle Peters
Ngabe ukhona ositholile isisombululo?
Akusebenzi ngilandela izinyathelo futhi okuwukuphela kwento eyenzekayo ukuthi lapho ngifaka i-usb yami futhi ngenza izinyathelo angitholi iwindi okufanele livele Kuvele iphutha elingalindelekile.Sicela ubheke kule URL ukuthola amathiphu wokuxazulula inkinga
UCarlos Mendez kusho
bakhanyise i-bios kepha abayiphothulanga inqubo efinyelela lapho kufanele ukhiphe khona umyalo ovela kwaShell.babefuna ukushintshela kumawindi futhi angikutholi okufanele ngikwenze. noma.
iyi-chromebook acer c710
Phendula u-carlos mendez
Nginenkinga efanayo, ngithola iphutha ebingalindelekile uma kukhona owaziyo ukuthi sengizamile ngamadivayisi amaningi we-USB futhi ngilokhu ngithola iphutha elifanayo, ngicela, uma othile azi, ngicela ungazise
Ungawususa kanjani umsindo wekhamera kusuka ku-Samsung Galaxy S5
Ungasibeka kanjani isithombe sethu kubha yokusesha yeFirefox